Ny kitapo manga vita amin'ny vehivavy - lehibe, kely, hoditra, eny an-tsoroka, kitapo, lamandy, mpivarotra
Kitapo manga - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hanamboarana singa miavaka amin'ny aloky ny aloky ny lanitra?
Ny kitapo manga dia iray amin'ireo akanjo indrindra amin'ny vehivavy. Noho ny alokaloka malefaka nataony, dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny sary amam-pihetseham-po izany. Ny vokatra dia ho lasa zava-dehibe amin'ny lohataona sy ny fahavaratra, raha te-hitondra ny hafanana ao amin'ny garderobe ianao.
Blue Bag ny vehivavy
Maro ireo karazana lamaody ampiasain'ny loko manga, izay mampiavaka ny sary ary manintona ny sary. Izy ireo dia aseho amin'ny karazana modely samihafa, anisan'izany ireto toetra manaraka ireto:
Ny vokatra dia azo ampitomboina amin'ny làlan-doko hafa: avy amin'ny fohy, izay ahafahanao mitondra irery ihany amin'ny tananao, amin'ny lelany, mamela anao hitondra valizy eo an-tsorokao;
Ny kitapo manga dia azo atao amin'ny soroka amin'ny rongony, tery na malalaka, matevina;
Ny modelim-pitaovan'ny vatana dia azo atao amin'ny fanesorana ny tady eny an-tsoroka;
Ny kitapo manga misy lamaody sasany dia natao amin'ny karazana kitapo ary mametraka araka ny tokony ho izy;
Ny halehibeny dia miovaova amin'ny takelaka kely ho an'ny lanjany lehibe, mety ho an-trano, mpivarotra, kitapo;
Ny fitaovana an'io alokaloka io dia mifanaraka tanteraka amin'ny haben'ny volom-bolafotsy, noho izany dia azo amboarina amin'ny rojo mifamatotra, akanjo, akanjo vy. Na izany aza, misy ihany koa ireo varieties voaravaka firavaka volamena;
Ny modely dia azo atao amin'ny hoditra, ny loko mamirapiratra, ny lamba firakotra, ny fanondronana, ny matavy na ny loko, ny ravina, ny tranon-koditra, mety hisy ny vokatra fanindroany.
Sakona manga eo ambonin'ny soroka
Ny iray amin'ireo safidy mahazatra indrindra dia ny kitapo manga iray, izay atao amin'ny soroka. Izy io dia aseho amin'ny karazana modely toy izany:
kitapo kely kely toy ny kitapo izay afaka atsipy eny an-tsorokao miaraka amin'ny lamosina boribory na volon-koditra volom-bolamena na volafotsy;
Ny fitaovana maoderina dia azo zakaina, mihantona amin'ny lafiny iray na mihetsiketsika, toy ny karazan-tsakafo hafa;
vokatra volomparasy, vita amin'ny fehikibo iray.
Ny fampiendrehana mahazendana sy mahavariana amin'ny sary tanora dia ho toy ny kitapo manga vita amin'ny hoditra, natao tamin'ny endrika kitapo . Amin'ny fanampiany, azonao atao ny mameno ny ovain'ny zatovovavy amin'ny fomba mahazatra, dia tsaroan'izy ireo araka ny toetrany manaraka:
Ahitana boribory roa izay mamela ny vokatra ho entina any aoriana;
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana dia ampiasaina isan-karazany: hoditra, sary hosodoko na lamba;
Ny rivèta dia azo ampiasaina ho toy ny fanangonana zavatra hita any amin'ny ampahany na amin'ny faritra manontolo;
Ny kitapo manga malefaka dia ahitana karazana printy sy sary.
Ny iray amin'ireo vahaolana samihafa indrindra dia ho toy ny kitapo manga tsara tarehy. Izy io dia aseho amin'ny karazany maro samihafa, izay tsy mitovy amin'ny toetoetra manaraka:
Ny rafitra dia mety ho mena na henjana, mitazona ny endrika tsara;
Ny zipera na ny bokotra dia azo ampiasaina ho toy ny fifadian-kanina;
ny isan'ny sampana dia mety tsy mitovy amin'ny iray na maromaro;
Mety misy pocket fanampiny, misy any ivelany.
Ho an'ny akanjo isanandro, ny kitapo manga lehibe amin'ny vehivavy dia tsara. Hanamora ny dingan'ny fivarotana izany ary hampiavaka ny sary amin'ny endriny kazhual. Ny endri-javatra karazana amin'ny vokatra dia ireto manaraka ireto:
rafitra malefaka amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny famokarana;
Misokatra ambony, ny zavatra dia mifatotra amin'ny bokotra iray monja;
Ny fanatrehana ny filaminana lava ho an'ny fitondrana.
Kitapo manga kely
Ao amin'ny lamaody maro ny famoratry ny famoronana malaza mametraka amin'ny kitapo manga kely iray. Ho fanampiny fanampiny amin'ny tsipika takariva izy ary hifanentana amin'ny fidirana amin'ny fankalazana. Ny modela dia mety miova arakaraka ny antsipiriany toy izany:
Misy kitapo misy kitapo natao hoentina eo an-tanany, toy ny kitapo lehibe izay mety hahitana ny zavatra faran'izay kely indrindra, ohatra, volo hoditra, kojakoja sy fanalahidy;
Ny ankabeazan'ny ankamaroan'ny fitaovana dia fenoina boribory kely iray na kofehy matevina, mba hahafahan'izy ireo mihantona eo amin'ny soroka. Ity ampahany dia mora azo afenina ao anatiny, tsy mitaky toerana be loatra, fa ahafahana mitondra zavatra amin'ny tànana amin'ny sitrapo;
Kitapo manga kely dia tsotra sy matevina, misy kely ny singa fanaingonam-pako na hodiovina amin'ny vato na rivotra.
Marika maro no mamokatra fitaovana toy ny kitapo manga. Izy io dia aseho amin'ny endrika maro samihafa modely, anisan'izany ny fashionista rehetra afaka mandray zavatra amin'ny tsirony. Tsy mitovy amin'ny toetrany izy ireo.
Ny haben'ny vokatra, izy ireo dia avy amin'ny paompy kely ho an'ny entana lehibe;
material used to manufacture: leather, substitute, textile, denim, suede;
Azo ampiasaina vahaolana samihafa ny fomba fanokafana: famolavolana koveta, sotrokely, soratra, rivotra.
Kitapo manga Michael Kors
Ny laza malaza eo amin'ireo vehivavy lamaody izay tia ny halavany, dia mampiasa kitapo manga Michael Kors. Ny marika amerikana nandritra ny taona maro dia mitoetra ho marina amin'ny endriny, izay miharihary amin'ny endrika toy izany:
Ny fahitana ny tsipika, ny vokatra dia tsotra sy marefo;
Ny kintana, ny endrika trapezoïde dia mipoitra, fa misy ihany koa ireo modely misy rantsana boribory;
Ny kitapo manga dia misy ny famolahana farafahakeliny, eo amin'ny tontolony misy alalana misy ny anaran'ny marika. Ny taratasy dia somary kely ary vita amin'ny metaly.
Kitapo manga DKNY
Safidy hafa iray izay hampifaly ny vehivavy tsara tarehy dia kitapo manga malefaka, izay novokarina teo ambanin'ny marika DKNY. Azonao atao ny manonona ny karazana modely toy izany:
toetran-tsakafo mahazatra na malalaka na mpivarotra;
kitapo kely izay mety hanjary firavaka amin'ny akanjo hariva;
Ny vokatra dia novolavolaina tamin'ny tendron'ny tsindry samihafa, boribory vita amin'ny rindrina na rojom-bary vita amin'ny rindrina, ahafahana mampifandray ireo singa ireo rehefa misy ny sombina vita amin'ny endriky ny rojo, ary ny ampahany iray dia misy rongony hoditra;
Amin'ny maha-fitaovana famokarana azy, dia ny lanjany tena izy ihany no ampiasaina;
eo amin'ny sisiny anoloana dia misy litera izay manondro ny maha-tompon'ity marika ity, dia vita printy eo amin'ny takelaka metaly na vita amin'ny metaly.
Blue Trussardi kitapo
Miaraka amin'ny fahatsapana avo lenta sy fanatanjahantena mifandray amin'ny kitapo manga hoditra Trussardi. Izy ireo dia manavaka ireo toetra mampiavaka azy ireo:
Ny vokatra dia mety ho monophonic na mifangaro amin'ny alokaloka hafa, izay manimba ny loko tena izy. Azonao atao, ohatra, ny mandady sy manga beige na mavo;
Tsy maintsy misy marika fiasan'ny orinasa, vita amin'ny endriky ny metaly;
dia afaka mametraka printy tany am-boalohany, manome ny zesta sasany.
Ny laza malaza amin'ny vehivavy lamaody dia mampiasa fonosana manga Furla. Izy io dia aseho amin'ny karazana modely samihafa, izay misy endri-javatra toy izany:
Vitsy na kely ny habe;
fitaovana tena ilaina amin'ny fehikibo;
Ny tombontsoa dia omena amin'ny endrika kibon'ny tany na sehatra;
Ny loko dia miovaova amin'ny hazavana manjavozavo indrindra amin'ny loko maitso;
Ny momba ny fananana ny marika dia manondro taratasy metaly kely.
Amin'ny inona no manao kitapo manga?
Ny kitapo manga toy ny kitapo manga dia mety ho tafiditra ao anaty tsipìka maro. Anisan'ny fampiofanana mahomby indrindra ireto manaraka ireto:
Amin'ny fahavaratra, ny valizy dia ho fanampiny mahavariana amin'ny akanjo vita amin'ny loko fotsy na palitao. Mety ho akanjo, skirt, manga, t-shirts, pataloha ary fika. Ny jiro dia mety ho akanjo iray na maromaro. Ny loko eny an-danitra dia hanome ny lanjany sy ny lolom-po.
Tombana tsara miaraka amin'ny loko mitovy. Na dia izany aza, ny tontolon'ny lamaody farany dia mamela ireo singa ireo tsy mifanohitra amin'ny fialan-tsasatra, noho izany dia tsy fepetra ny feon'ny feo.
Ho an'ny tsipìka sy sary isan-karazany amin'ny fomba kazhual, ny vahaolana tonga lafatra dia zavatra avy amin'ny denim: jeans, jackets, skirts, bibikely. Mety ho maivana maizim-boninahitra izy ireo na manga manga.
Ho an'ireo ankizivavy manana kitapo manga ao am-pandriany, inona no tokony hatao an'ity fitaovana amin'ny ririnina ity? Hira fiderana miaraka amin'ny akanjo ivelany, vita amin'ny loko mitovy, ny loko fotsy na ny pastel. Azonao atao ny manantitrantitra ny loko eny an-danitra amin'ny fanampiana ny satroka na ny fombafomba mitovy amin'izany. Mba hanampiana ilay sary mirindra dia hanampy ny jeans amin'ny aloky ny manga.
Perfume nataon'i Antonio Banderas
Ampanga ny ampahany amin'ny sary
Kavina volamena miaraka amin'ny perla - akanjo tsara tarehy ho an'ny tsiro sy kitapo rehetra
Ny peratra inona no omena rehefa manao tolotra?
Rafitra fanakambana ho an'ny trano fanakambanana varavarana
Xsefokam - analogues
Zana-kavoana ho an'ny akoho
Mialà amin'ny tananao
Jeans maoderina amin'ny 2014
Jennifer Lopez no mpisolovava voalohany manerantany ho an'ny zon'ny vehivavy sy ny vehivavy avy amin'ny Firenena Mikambana
Ravina alika matevina
Fiomanana ny tany ho an'ny zana-ketsa
Broccoli karaoke - oviana rehefa hijinja?
Inona no havoakan'ny Repoblika Tseky?
Ny akanjo hariva amin'ny couture 2014
Biby katsaka miaraka amin'ny akoho
Kalorikin'ny borsch miaraka amin'ny henan'omby
Mialà eo amin'ny Baïkal amin'ny ala